ndao-hilalao-1 - Fichier PDF
ndao hilalao 1 .pdf
Nom original: ndao-hilalao-1.pdf
Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Adobe Acrobat Pro Extended 9.0.0, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 13/02/2020 à 06:02, depuis l'adresse IP 154.126.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 204 fois.
Taille du document: 2.7 Mo (111 pages).
Eto am-piandohana dia tsara ihany ny
hamaritana ny atao hoe : lalao araka izay
hamaritan’ny “Firaketana ny fiteny sy ny
zavatra Malagasy” azy. Ny fototeny dia
« lao » raha miverina indroa dia lasa hoe
« laolao », amin’ny fiteny Betsileo sy any
anindrana dia mbola mahatana ny endriny sy
ny fomba fanonona azy hoe :« laolao ». Ny
heviny dia hoe : SOMA , DOLA, HIRA :
fihetsiketsehana atao hahafinaritra ny tena ;
na atao vokatry ny hafaliana, na atao
hampiseho ny hafaliana. Oh : Toetra
nahariana ny mananaina rehetra ny milaolao.
Tsy hain’ny zaza ny mamitsaka fotsiny tsy
milaolao. Ny atao hoe : KILAOLAO na
TSILAOLAO ny zavatra enti-milaolao toy ny
kanety, tandrimo, saribakoly, kalesy kely ets
… izay ny famaritana nalaina tao anaty
firaketana. Eto ambany kosa dia hijery ireo
torohevitra momba ny lalao.
Ho an’ny mpampilalao
Tokony hahazo sy hahalala tsara ny
lalao. Miezaka manazava sy mampianatra ny
fitsipiky ny lalao, tsara raha maka ohatra
amin’ny fanazavana ny lalao. Mieritreritra ny
tanjaka sy ny hery ilaina amin’ny lalao iray,
ny fitaovana ilaina, ny fifandanjan’ny isan’ny
mpilalao ary ny hakingany. Mahay
mampilalao amin’ny lalao tsotra nefa
mampientana ny rehetra. Raha mampiasa
bokin-dalao ny mpampilalao dia tokony
hanana karnie handraiketany ny fanovana na
fanatsarana hitany sy ny lalao noforoniny.
Matetika dia lasa tsizarizary ny
fitaovana ampiasaina amin’ny lalao iray nefa
io no tena manome aina ny lalao. Mila
fotoana noho izany ny fikarakarana ny
fitaovana. Tsy ilaina anefa ny mampisa
fitaovana lafo vidy raha tsy ampy ny entimanana. Ireo fitaovana ilaina dia tsy maintsy
atao lisitra mba ialana amin’ny fanadinoana.
Tafiditra ao anatin’izany fitaovana izany
fitafiana seho ivelany (déguisement). Tsy
maintsy jerena tsara koa ny fitaovana mba tsy
Fomba fitarihana lalao
Tsara ihany ny manantitrantitra
amin’ny mpampilalao fa ny mampahomby na
tsia ny lalao iray dia miankina indrindra
amin’ny fitarihana ny lalao. Tsy maintsy
hain’ny mpampilalao noho izany ny
manentana ny mpilalao ka hivoaka ny hery sy
ny angovo ao anatin’ny tsirairay. Eto koa dia
tsy maintsy hay tsara aloha ny lalao sy ny
faritra ilalaovana alohan’ny hanazavana ny
lalao. Tsy maintsy efa vonona daholo ny
fitaovana ilaina rehetra. Rehefa fantatra tsara
ny toerana ilalaovana dia esorina daholo ireo
zavatra mety hitera-doza. Hay tsara ny
misintona ny sain’ny rehetra amin’ny zavatra
hazavaina, raha tena mahay manentana tsara
ny mpampilalao dia tsy mila akory izy miteny
hoe “mangina” amin’ny fotoana hanazavana
ny lalao fa hainy ny misintona ny rehetra
amin’ny zavatra hazavainy. Alohan’ny
hanazavana ny lalao dia omeo lohateny aloha
ny lalao, haverimbereno ny fanazavana ary
araho fihetsika sy ohatra, izay vao atomboka
ny lalao. Hampatsahivo mandrakariva fa
tokony hahay milalao ny rehetra ka ialana ny
tendrom-po tsy mba namana (fair play). Raha
tsy nandeha araka ny tokony ho izy ny lalao
dia hajanony aloha ny lalao, avereno
hazavaina izay vao atomboka indray. Tokony
ho hain’ny mpampilalao tsara ny fotoana
tokony hanajanona ny lalao, izany dia
miankina indrindra amin’ny traikefany sy ny
fizarany mampilalao. Mila hay tsara noho
izany ny mampilendalenda ny mpilalao, tsy
dia tsara anefa ny mampilendalenda diso
tafahotra ny mpilalao.
Fomba fizarana ny ekipa
Ho an’ny skoto tsy dia mametraka
olana loatra ny fizarana ny ekipa satria efa
saika sokajy na enina na tarika ny rehetra
izay efa somary mitovitovy habe sy taona. Ho
an’ny fikambana tanora hafa kosa ireto ny
soso-kevitra omena mba hifandanjan’ny
- Asaina milahatra tsiroaroa ny mpilalao
- Mifidy miafina nomerao 1 na 2 araka izay
- Miaraka avy eo izay mitovy nomerao ary
mahazo ekipa roa mitovy habe sy herimbatana.
- Raha te-hahazo ekipa telo dia atao nomerao
- Ny tsara dia mifidy mpilalao iray ny ekipa
Inona no tombontsoa azo avy amin’ny
Hoy Baden Powell : “ Ny lalao no
mpanabe voalohany indrindra” (Livre des
louveteaux P 215) marina loatra izay tenin’i
BP izany, amin’ny lalao manko dia afaka
manatsoaka lesona ny ankizy ary tsy mila
mpampianatra. Ny lalao dia manana
andraikitra lehibe eo amin’ny famolavolana
ny toe-tsaina sy ny rafi-batana , ary
mahatonga ny ankizy ho mpinamana. Ary
manamora ny firindran’ny fiainany amin’ny
fiaraha-monina. Sarotra ho an’ny mpampiasa
ankehitriny ny mitady olona manana “esprit
d’equipe”, ny tanora izay novolavolaina
tamin’ny lalao dia mora ho azy io toe-tsaina
io satria efa zatra niaina tao anaty ekipa. Ny
olona rehefa zatra milalao dia mora ho azy ny
manaja fitsipika, ary lasa manana fifehezantena (autodiscipline). Hainy ny manaja ny
tenany sy manaja ny hafa. Ho an’ny mpanabe
tanora dia tsara ny manomana lalao
manintona sy mahaliana ny tanora sy ny
ankizy. Tsy ilaina anefa ny manindraindra
olona tokana na roa amin’ny lalao fa ny tena
zava-kendrena dia ny hahatonga ny rehetra
hahatratra ny zava-kendrena izay efa
ataontsika dia ho hitantsika fa ho mora raha
eritreretintsika ho toy ny lalao ary isika no
toy ny mpilalao ao anaty ny ekipa iray.
Amin’izay fotoana izay dia samy mitazona
ny toerana sy ny andraikiny ny rehetra, ary ny
rehetra dia samy miezaka izay hahatsara sy
amin’izay isika rehetra dia handeha ho azy ny
asa fihariana hataontsika.
Eto dia mirary antsika rehetra hazoto
amin’ny fitrandrahana hatrany lalao vaovao
Ity kôdy ity dia fampiasa matetika indrindra
ho an’ireo Lovitao, Voronkely, Hanitriniala.
Isaky ny litera iray dia rahona iray izany hoe
boribory kely iray. Ohatra A boribory iray,
B boribory 2, E boribory 5, raha Z Izany dia
Ity kôdy ity koa dia an’isan’ny mora ho
an’ireo ankizy latsaky ny 12 taona. Isaky ny
litera iray dia aseho amin’ny alalan’ny
masoandro iray. Ny zana-tsoratra dia aseho
amin’ny tsipika lava, ny renin-tsoratra kosa
dia aseho amin’ny tsipika fohy.
MORSA MIOVA SORATRA
Azo atao tsara ny mamadika ny môrsa ho
litera ka ny zana-tsoratra dia maneho ny
teboka, ny renin-tsoratra kosa maneho ny
tsipika. Raha toa tsy mahita teny mety azo
ilazana ilay kôdy môrsa dia azo atao ny
manisy fonon-teny ilay
B = voay
W = amp(y)
Ity kôdy ity dia efa saika fampiasan’ny
skoto matetika nefa dia mbola averina eto
Kody A = K
Kody “Pays” (P = I)
Ity misy fomba famahana kôdy abidy. Azo
atao tsara koa ny mamadika azy ity ho asa
tànana ho an’ny ankizy.
Fitaovana : Kômpa, pinezy, penisilihazo,
taratasy matevina, hety
Manao faribolana amin’ny kômpa tokony
ho 10 sm ny savaivony. Dia didina iny
faribona iny. Manao faribona toy ilay teo fa
atao 9 sm kosa ny savaivony. Atao
mifanindry ireo avy eo ny lavaka kômpa.
Atao mifanandrify ilay lavaka kômpa eo
afovoany. Avy eo zaraina 26 mitovy ilay
faribolana roa ireo. Tazoniny amin’ny
pinezy amin’izay avy eo. Toy izao ny
zavatra azo :
Apetaka amin’izay ny abidy amin’ny teny
frantsay. Dia ho hitanareo fa ho mora
amin’ny ankizy ny mamaha kôdy.
TABILAO TSY FENO
Manao tabilao ka tsy asiana tsipika ny
soloana teboka ny litera rehetra ka lasa toy
izao ny fanoratra ny SKOTO
Manao tabilao toy ilay teo aloha ihany
Asiana filaharany kosa ilay toy izao :
1- Andalana (ligne)
2- Tsanganana (colonne)
3- Laharana (rang)
Toy izao ny fomba fanoratra azy rehefa
soloana teboka ny toerana misy azy ohatra :
Fitaovana : taratasy matevina, marker, hety
Ity lalao ity dia afaka sady manao karazana
asan-tànana kely ho an’ny ankizy no
Didiana ilay taratasy ka tokony ho 3 sm ny
sakany ary 6 sm ny halavany. Atao 26 isa.
Rehefa vita izany dia asina tsipika
manasaraka azy avy eo afovoany. Litera
môrsa ny iray, ary litera tsotra ny ilany. Toy
izay izy rehefa vita.
Azo atao tsara ny milalao ity isaky ny ekipa
na milalao tsirairay arakaraky ny
Manoritra fafana ka 6 ny andalana ary 6 ny
tsanganany. Asiana abidy frantsay ao
anatiny ka tsy apetaka ny W.
Maka teny iray misy litera 5 ka tsy misy
miverina ny litera ao anatiny. Eto dia
TRANO no ataotsika.
A = TT, V = RO, M = AA, L=RA
Kôdy trano / fomba
Mitovy amin’ny etsy ambony saingy ovaina
“fomba” ny trano eo amin’ny tsanganana
T R A N O
O F G H I J
M K L M N O
B P Q R S T
A U V X Y Z
A=TF, V=RA, M=AM, L=RM
Mandehana miantsena laoka
O A L A N
K A H E E
A N M D S
TARATASY MISY NOMERAO
Fitaovana : Lampe de poche iray isaky ny
mpampilalao, Taratasy mavo, manga,
maitso isaky ny sokajy (ny sokajy no mifidy
loko iray izay tiany)
anakitelo. Mitondra ireo taratasy miloko
misy ny nomerao 1 ka hatramin’ny 3.
(Ohatra mpampilalao voalohany taratasy
mavo n° 1, manga n°2, maitso n° 3,
mpampilalao faharoa mavo n°2, manga n°
3, maitso n° 1, mpampilalo fahatelo mavo
n°3, manga n° 1, maitso n° 2. Lasa mandeha
miafina ireo mpampilalao miaraka amin’ny
taratasiny avy sy ny lampe de poche.
Miafina anaty alaala kely, ary mampirehitra
ny lampe de poche isaky ny 1 minitra indroa
na intelo. Mitady ny lokony ny sokajiny sy
ny nomeraony avy ny mpilalao. Raha misy
mpilalao mahita ilay mpampilalao ka ny n°
2 no hitany voalohany. Dia omen’ny
mpampilalao taratasy kely fotsy izy
hanamarika fa efa nahita n° 2 izy fa tsy
maintsy mitady ny n°1 izy aloha vao
miverina mitady ny nomerao manaraka.
Raha any nomerao 1 kosa no hita voalohany
dia mandray ny n°1 ary lasa mitady ny
nomerao 2 sy ny manaraka, raha toa kosa ny
nomerao 3 no hitany manaraka dia tsy
maintsy mitady ny n°2 izy aloha. Rehefa
milalao elaela dia tsofina ny kiriorioka ka
manao tombana momba ny lalao.
JIRO SY KIRIORIOKA
Fitaovana : Lampe de poche roa, kiriorioka
Mila mpilalao roa mitondra lampe de poche
sy kioriorioka miainga mialoha mandositra.
Rehefa lasa lavitra dia miainga ireo
mpanara-dia ka miezaka misambotra ny
lampe. Ny kiriorioka dia tokony tsofina
isaky ny 1 minitra dia toy izany koa ny
lampe ampiretina isaky ny 1 minitra.
Fitaovana : Lampe
Ity lalao ity dia tsara raha atao rehefa maty
masoandro. Ahantona amin’ny hazo mora
hanihana ny “lampe” iray ary faritana tady
ny manodidina ilay hazo tokony ho 10 m
miala amin’ilay hazo. Zaraina roa ny ireo
mpilalao ka ny ekipa iray mpanafika ary ny
ekipa iray kosa mpiandry ny fanala ety
ivelan’ny faritra. Ny tanjon’ny mpanafika
dia manao izay hamonoana ny jiro. Mahazo
isa iray ny mpanafika rehefa mahavono ny
jiro. Ny mpiandry kosa dia mahazo isa iray
rehefa mahakasika ny mpilalao avy any
amin’ny mpanafika. Rehefa afaka 15 mn dia
mifamadika indray ka lasa mpiandry ilay
Fitaovana : Tady (mirefy 30 m)
Alohan’ny maty masoandro, dia efa afatotra
ao anaty alaala anaovana ny lalao ny tady
mahazaka (tokony ho hatreo amin’ny
valaha, na mihoatra). Amin’ny làlana
handehan’ny tady no asiana zavatra mety
manakatsakana nefa azo dinganina tsara.
Rehefa milatsaka ny alina dia atomboka ny
lalao, ka manaraka ny tady ary tsy mahazo
mandrehitra jiro. Adim-pamataranandro no
hifaninana ka ny mpilalao manana fotoana
tsara indrindra no maharesy.
Fitaovana : Lampe de poche, folara
Manao faribolana faran’izay lehibe ny
mpilalao. Eo afovoany kosa misy mpilalao
iray tampenana folara ny masony, miaraka
amin’ny mpanampy aza anakiray. Rehefa
mitsoka ny kirioriokany ny mpampilalao dia
manomboka ny lalao, ka samy miezaka
mitsaitsaika manatona ilay vorondolo ny
mpilalao rehetra. Ilay vorondolo kosa afaka
mitaratra ny jiro eny an-tanany no sady
miteny hoe “stop” ka ny mpilalao izay
voatifitra dia miala. Ny sisa kosa mitohy
manatona ilay vorondolo. Izay mahakasika
azy voalohany no misolo ny toeran’ilay
Fitaovana : Labozia, afokasoka
Milahatra mahitsy ao aorian’ny tsipika
fiaingana ny ekipa tsirairay. Mitondra
labozia mirehitra ary mihodina vato iray
izay tokony ho 20 na 30 m miala amin’ny
tsipika fiaingana. Ny mpilalao izay maty ny
jirony dia miverina eo amin’ny tsipika
fiaingana mandrehitra ny jirony. Rehefa
tonga eo amin’ny tsipika fiaingana izy dia
manolotra ny labozia amin’ny mpiray ekipa
aminy. Ny ekipa izay tapitra nandray anjara
daholo ny mpilalao ao aminy no maharesy.
Fitaovana : Lampe de poche iray ho an’ny
mpiandry vohitra, saina iray.
Mamaritra toerana iray atao hoe vohitra
(tsara raha faritana amin’ny tady) ary
hatsatoka eo afovoany ny saina. Ny
mpiandry vohitra dia tsy mahazo mitsofoka
ao anatin’io faritra io. Miparitaka
manodidina lavitra io faritra io ny mpilalao
rehetra ary samy miezaka mijaikojaiko sy
mandady haka ilay saina. Ny mpiandry
vohitra kosa dia tsy mahazo mandefa ny
lampe de poche afatsy indroa isaky ny
mpilalao, izay hoe raha 10 ny mpilalao dia
in-20 ihany izy no afaka mandefa lampe de
poche ary tsy mahazo miala afatsy 2 m
miala ny faritry ny vohitra. Maty kosa ny
mpanani-bohitra rehefa voatonona ny
anarany no voatifitry ny mpiandry vohitra
amin’ny lampe de poche. Tokony tsy
hihoatra ny 5 segondra ny farafirehetan’ny
lampe de poche isaky ny mitifitra ary tsy
azo havilivily. Raha misy mpilalao mahazo
ilay saina dia izy indray no lasa mpiandry
Fitaovana : Tsaramaso maina 1 kapaoka ka
lokoana amin’ny marker ho loko 4
karazany, lampe de poche isaky ny ekipa.
Zaraina ho ekipa 2 na 4 ny mpilalao ary
samy mitazona lampe de poche iray isaky
ny ekipa. Rehefa manome baiko ny
mpampilalao dia vonoana amin’izay ny jiro
ary haparitaka ny tsaramaso amin’ny
toerana tsy mihoatra ny 100 m². Ary lasa
mitady izany ny mpilalao rehetra. Rehefa
afaka kelikely dia harehitra indray ny jiro
hijerena ireo tsaramaso sisa tavela. Ny ekipa
maharesy dia izay ekipa mahazo loko iray
be indrindra (ohatra : mena).
LALAO ANATY RANO
MORON-DRANO NA ANATY RANO
Milahatra mahitsy manamorona ny renirano
tsy dia lalina loatra ny mpilalao. Rehefa
miteny ny mpampilalao hoe : « Dans l’eau »
dia mitsabikina ao anaty rano daholo ny
mpilalao rehetra. Raha miteny indray izy
hoe « Sur la berge » mitsabikina ivelan’ny
rano daholo ny mpilalao rehetra. Raha
miteny kosa ny mpampilalao hoe « Sur
l’eau » na « Dans la berge » dia tsy tokony
hihetsika amin’ny toerana misy azy ny
mpilalao rehetra. Raha toa ka tenenina
indroa misesy ny baiko iray dia tokony tsy
misy mihetsika koa ny mpilalao rehetra. Ny
mpilalao rehetra mihetsika dia miala ny
GANAGANA ANATY RANO
Fitaovana : baolina lehibe
Manao faribolana ao anaty rano hatreny
amin’ny valahany ny mpilalao afatsy ny telo
na efatra amin’izy ireo izay eo afovoany. Ny
mpilalao ety ivelany kosa mihezaka
mitoraka ny mpilalao eo afovoany, ny
mpilalao eo afovoany kosa misitrika ao
anaty rano mba ialana izany. Ny mpilalao
izay mahatoraka dia izy indray no misolo
ilay voatoraka eo afovoany.
Fitaovana : Tavoahangy plastika 0.5 litatra ,
Bidon azo hitondrana rano fiandry.
Zaraina roa ny ekipa ka samy mitondra ny
basy ranony avy (Tavoahangy plastika
asiana lava-patsika ny sarony) ary rano
fiandry amin’ny bidon. Miainga ny ekipa
manaraka avy ato aoriana kosa ny ekipa
manaraka rehefa afaka elaela kely. Ny ekipa
voalohany kosa efa miandry kendry tohina
any ambadika any ka dia raikitra amin’izay
ny fifampitifirana. Tsara ity lalao ity raha
atao amin’ny toerana misy alaala.
Anjaran’ny mpampilalao ny mamaritra ny
Fitaovana : Bosoa na polisterenina mety
mitsingevana iray isaky ny mpilalao
Zaraina ekipa maromaro ny mpilalao ka 6
isaky ny ekipa. Mijoro mitandahatra eny
ivelan’ny rano. Fatorana vato kely ny bosoa
na polistirenina ary hapetraka eo anaty rano
hatreny amin’ny valahan’ny mpilalao.
Rehefa manome baiko ny mpampilalao dia
mihazakazaka mitsoboka ao anaty rano ny
mpilalao ary maka ny bosoa amin’ny vava
ary miverina mandray ny tànan’ny namany
izay manohy ny lalao. Izay ekipa mahavita
mialoha no maharesy.
Fitaovana : Vera plastika iray isaky ny
ekipa, seau misy rano madio.
Zaraina ekipa 2 na 3 ny mpilalao ary asaina
milahatra mifanao aloha sy aoriana.
Manoritra tsipika iray tokony 10 m miala
amin’ny mpilalao ary hapetraka eo ny seau
misy ny rano madio. Rehefa manome baiko
ny mpampilalao dia mihazakazaka mankeny
amin’ny seau ny mpilalao laharana
voalohany isaky ny ekipa. Maka rano iray
vera ary mandohalika eo amin’ny tsipika
izy. Tazoniny amin’ny nify ny vera avy eo
sotroiny ny rano. Lasa izy miverina eny
amin’ny ekipany ary manolotra ny vera
amin’ny ekipany. Dia mitohy hatrany ny
lalao ka izany mahavita voalohany no
Fitaovana : siponjy (éponge) lena roa.
Mipetraka manao faribolana ny mpilalao
rehetra. Mila mpilalao ankiroa atao eo
afovoany ary mifanatrika ka mifapitehaka
ny tongony roa. Tampenana folara ny
mason’ireo mpilalao eo afovoany ary omena
siponjy lena izy eny an-tànany. Rehefa
manome baiko ny mpampilalao dia lasa
mandady mitsoaka ny mpilalao. Rehefa
miteny kosa ny iray amin’ireo mpilalao
mitampi-maso hoe “AOKA” dia mijanona
ny mpilalao ka torahiny amin’ny siponjy
lena, izay voatoraka dia izy indray no lasa
MITSOFOKA AMBANY TADY
Fitaovana : tady , hazo maranitra mety
hatsatoka anaty rano.
Isan’ny mpilalao : ekipa 2 na 3
Rehefa milalao anaty rano dia tsy maintsy
jerena tsara aloha ny faritra ilalaovana.
Mijery rano tsy tokony hihoatra ny
Hatsatoka ny hazo ary henjanina amin’ireo
hazo ireo ny tady, tokony ho 5 sm miala
amin’ny rano. Atao telo ireo tady ireo.
Milahatra mifanao aloha sy aoriana eny
ivelan’ny rano ny mpilalao. Rehefa manome
baiko ny mpampilalao dia mihazakazaka
mitsofoka ao ambanin’ny tady ny mpilalao
ary mitety azy telo. Avy eo dia miverina ary
mipaika tànana ny namana mpiray ekipa, io
indray manao toy ny teo aloha. Dia mitohy
hatrany ny lalao ka izay mahavita voalohany
Fitaovana : Tavoahangy plastika tapahina
avy eo afovoany, bosoa na polisterenina.
Tsara raha toerana mora hanovozana rano
Isan’ny mpilalao : ekipa 3 na 4
Hapetraka amin’ny marin-toerana tsara ny
tavoahangy ka tadiavina ny fomba tsy
hampianjera ny tavoahangy ary atao ao
anatiny ny bosoa na ny polisterenina.
Rehefa manome baiko ny mpilalao dia samy
mameno rano ny tavoahanginy haingana ny
mpilalao mba hahafahana manala ny bosoa
ao anaty tavoahangy. Izay ekipa mahafeno
rano ka mahaala ny bosoa ety ivelany no
INONA NO MAMPITOVY IRETO :
1- Baraingo, teboka amam-paingo, tsoraka
2- Lalàna, tanàna, mazàna
3- Boky, sekoly, penina
4- Paiso, paoma, poara
5- Jesoa, Josoa, Joba
6- Matio, Marka, Petera
7- Akondro, papay, voasary
8- Ovy, mangahazo, vomanga
9- Telefaonina, televiziona, telegrama
10- Trano, fisoko, vala
11- Madagasikara, La réunion, Maurice
1- Samy misy teboka
2- Samy eo amin’ny “a” faharoa ny
3- Samy teny anglisy no niandohany
4- Samy miantomboka amin’ny “P”
5- Samy miantomboka amin’ny “j”
6- Samy mpianatr’i Jesoa
7- Samy voankazo
8- Samy ny vodiny no hohanina
9- Samy tele
10- Samy fonenana
11- Samy Nosy
Inona ary izany :
1- Akana vao mitombo?
2- Alao ny atiny, alao ny avokavony, avelao
3- Antitra vao tia sangy?
4- Bolobolo mitera-bato fotsy, vato fotsy
5- Dobo kelin’ Andriamanitra tsy azo
6- Batain-tsy zaka, afindra mora foana?
7- Fandri-borovoro an-tanety : raha tsy
mahavoa, maharaikitra ?
8- Fonosin’ny mpanan-karena fa arian’ny
9- Fony maizina natao tsy hazava, nony
mazava tsy maizina intsony?
10- Hano aho hihinanako anao?
11- Hitsidika no naleha ka fahaverezana no
12- Iray no atelina ka telo no aloa?
13- Itondray bararata tsy loaka aho
14- Izay ateraka lahy avokoa?
15- Izy mivady no miady ka ny ankizy no
16- Mitsilany, mahazo hena; miankohoka,
17- Ny sakany sy ny lavany indray manono
18- Raha atoandro izy, mampitorovoka,
raha alina mampitsinkasina?
19- Teraka anio dia akapoka?
20- Teraka iray botry, teraka iray botry, i
Faralahy no lava indrindra?
4- Akoho sy atody
9- Loha sola
15- Ny fanoto sy ny laona ary ny vary
1- Vazaha vaky sambo ary nanorina ny lapa
eo Manjakamiadana, izy no iza?
2- Manambonahitra angilisy nanorina ny
skotisma, Izy no iza?
3- Mpanjakan’ny imerina enin-toko, izy no
4- Izy no mpanjaka nanao ny abidy
Malagasy, izy no iza?
5- Mpanjaka nandimby an’ny RADAMA I,
izy no iza?
6- Teraka tao Maroantsetra ary depiote
tamin’ny andron’ny fanjanahatany, izy no
7- Malagasy manam-pahaizana nampiasa ny
zava-maniry ho fitsaboana, iza no iza?
8- Ministry ny atitany ary voaheloka ho faty
tamin’ny andron’ny Jeneraly Galléni, izy no
9- Teraka tao Betilahema, ary mpanjakan’ny
jiosy, izy no iza?
10- Tamin’ny 1825, izy no nahita ny abidy
ho an’ny jamba , izy no iza?
1- Jean Laborde
2- Robert Stephenson Smyth BADEN
5- Ranavalona I
6- Jean Jacque Rabemananjara
7- Albert Ratsimamanga
(Lalao Malagasy fianarana manisa no sady
fanalana ny alina sy takariva)
Andrimaintibe ny papango,
Kely mpitsoka farara ny takatra,
Lava tanan-tsy miasa ny foza,
Bodokely matavy ny toho,
Kely matsilo loha ny patsa,
Ny fangaraka no kely andilana :
Ny isan-jato no mafy,
Ny takatra no fisa-doha :
Matory amorom-pahiry ;
Ny sorohitra no kely fingotra ;
Sendra ny tao-mihodivitra
Ny goaika no fotsy tenda :
Ny akoho no tsy nanidina :
Tsy nahandry ny andro maraina (na ny
Fitaovana : baolina sipaonjy 2
Manao faribolana ny mpilalao rehetra. Ny
mpilalao iray dia eo afovoany sady
mitazona ny baolina iray. Ny baolina iray
kosa hatsipy mihodina miankavanana. Ny
mpilalao eo afovoany kosa manipy ny
baolina amin’izay tiany, matetika dia izay
efa mitazona ny baolina no homeny azy.
Ny mpilalao izay mandray ilay baolina
avy eny afovoany dia mandefa ny baolina
mihodina koa. Izay mpilalao mandatsaka
ny baolina dia misolo ilay mpilalao eo
OVY VAO MAFANA
Fitaovana : baolina
Manao faribolana mpilalao afatsy ny
anakiray izay eo afovoany. Manomboka
ny lalao rehefa hatsipin’ny mpilalao eo
afovoany amin’izay tiany ny baolina.
Hatreo dia miezaka misakana ny baolina
amin’izay hanipazana azy ilay mpilalao eo
afovoany. Marihana fa ny baolina rehefa
hatsipy dia tokony hihoatra ny valahana
hatrany. Raha voasakany ny baolina dia
izy indray no maka ny toeran’ilay nanary
OVY VAO MAFANA AN-KIRA
Manao faribolana ny mpilalao afatsy ny
iray izay mivoaka ety ivelany sady mitodidamosina azy ireo. Hatsipin’ny ireo
mpilalao mihodina miankavanana ny
baolina mandritra izany fotoana izany
kosa mihira ilay mpilalao ety ivelan’ny
faribolana. Rehefa tapitra ny hira dia
mijanona ny baolina ka ilay mpilalao
nitazona baolina farany no manampy azy
mihira saingy tsy mihetsy eny amin’ny
toerana fa tsy omena baolina intsony.
Rehefa mihamitombo ny mpihira ka iray
sisa ny mpilalao dia mijanona ny hira dia
izy indray no misolo ilay mpihira teo
Fitaovana : Baolina voron-damba na
baolina sachet 3 , boatin-dronono 3
Manoritra faribolana iray lehibe izay
tokony ho 10 m ny savaivony.ary
hapetraka mifanaingina eo afovoany ny
kapoaka, 2 ambany ary 1 ambony. Ilay
mpilalao eo afovoany kosa miaro ny
toraka avy eny ivelany no afaka mamerina
amin’ny toerany ny kapoaka nianjera.
Misesy ny mpilalao rehefa mitoraka ary
afaka mifindrafindra toerana. Marihina fa
afaka mitoraka intelo ny mpilalao ary ny
mpilalao nampianjera ny kapoaka indray
niaraka no maharesy ka misolo ilay
mpilalao eo afovoany.
FENOY NY HARONA
Fitaovana : harona, goavy manta na
garanadrelina dia faran’izay betsaka.
Hatsipin’ny mpampilalao amin’ny toerana
faran’izay lavitra ny goavy. Lasa ny
mpilalao manangona ireo goavy anaty
harona. Tsy maintsy ferana ny fotoana
afahana milalao ohatra 10 mn na 5 mn.
Rehefa tapitra ny fotoana dia isaina ny
isan’ny goavy isaky ny ekipa. Ny ekipa
nahazo goavy be indrindra no maharesy.
MANDEHA MAFY NOHO NY
Fitaovana : baolina 1
Manao faribolana ny mpilalao. Omena ny
mpilalao iray ny baolina, izy kosa manipy
ny baolina amin’ny mpilalao eo anilany
miankavanana ny baolina. Ilay mpilalao
teo kosa lasa mihodina mihazakazaka
miankavanana ary miverina eo amin’ny
toerany. Tapitra ny lalao rehefa nandray
anjara daholo ny mpilalao.
AZA ALATSAKA NY BAOLINA
Fitaovana : baolina voron-damba iray
isaky ny mpilalao.
Manao faribolana ny mpilalao. Ny
antsasaky ny mpilalao dia omena nomerao
tsy ankasa (impaire) mifanaraka tsara. Ny
ambiny kosa omena nomerao ankasa
(paire). Ohatra 11 ny isan’ny mpilalao dia
toy izao no tokony ho nomeraon’ny
mpilalao : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10.
samy miara-manipy ny baolina ny
mpilalao rehetra ka ny nomerao 1 manipy
amin’ny nomerao 2, ny nomerao 2 manipy
amin’ny nomerao 3, ny nomerao 3 manipy
amin’ny 4 dia mitohy hatrany. Tsy ilaina
ny manenjika ny baolina latsaka mba tsy
hanelingelenana ny lalao. Mba hahatsara
ny lalao dia tsara raha asiana gadona ny
fanipazana ny baolina ka samy miramiteny hoe “hop” isaky ny manipy
Fitaovana : baolina lavalava, folara isaky
Mitovy amin’ny fomba filalaovana rugby
saingy amin’ny endriny skoto izany hoe
manao rambo folara ny mpilalao rehetra.
Mba hanakanana ny fanafian’ny ny ekipa
mpifanandrina sintonina ny rambon’ny
mpilalao mitondra baolina. Ary lasan’ny
ekipan’ireo nahazo folara ny baolina. Ny
baolina koa dia misy melée.
Tsara ity lalao ity raha 7 no isan’ny
Fitaovana : baolina , tady mahazaka 4 m
Manoritra faribolana tokony ho 8 m ny
savaivony. Hafatotra amin’ny lohatady ny
baolina. Manendry mpilalao iray eo
afovoany io no mitazona ny tady misy
baolina. Rehefa manome baiko ny
mpampilalao dia manodinkodina io
baolina io ilay mpilalao eo afovoany ka
tokony tsy hihoatra ny lohalika ny
haavony. Izay mpilalao voakapoky ny
baolina dia miala ny lalao.
Ny maharesy dia izay mpilalao farany ary
izy indray no misolo ny eo afovoany.
TSIPY BAOLINA TELO ANATY
Fitaovana : baolina telo
ndao-hilalao-1.pdf (PDF, 2.7 Mo)
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01935775.